विष्णु माझीको नयाँ गीत ‘चरी जेलैमा’ले बनायो यस्तो रेकर्ड ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठभिडियोविष्णु माझीको नयाँ गीत ‘चरी जेलैमा’ले बनायो यस्तो रेकर्ड !
काठमाडौं : गायिका विष्णु माझीका गीतहरु हरेक पटक चर्चामा आउँछन् । गएको साता सार्वजनिक उनको नयाँ गीतले त झन् रेकर्ड नै बनाएको छ । जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा, मै छोरी रुँदैरुँदै बेसी मेलैमा यो गीत सार्वजनिक भएको एक हप्तामा ४० लाख भ्युज पुगिसकेको छ। गीत सार्वजनिक भएको छैटौं दिन २४ घन्टा भित्रै गीतले १० लाख बढी भ्युज पाएको छ।
एकै दिनमा यतिधेरै भ्युज पाउन सफल यो गीत टि’कटकमा भाइरल भइरहेको छ । बिहे गरेर गएकी छोरीले माइती सम्झेर गाएको गीतमा महिलाको वेदना पोखिएको छ। गीत तीजको सन्दर्भमा निकालिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा गीतले बहस पनि छेडेको छ। ‘सपना म्युजिक इन्ड्रस्ट्रिज’ नामक युट्युब च्यानलमार्फत् सार्वजनिक गीतको कोरसमा गायिका विष्णुलाई महिमा आचार्यले साथ दिएकी छन्। यस गीतमा विष्णुका श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द-संगीत छ।
अधिकांश गीतहरुले तीजको मौलिकता गुमाएको गुनासो आईरहेको समयमा यस गीतलाई स्रोता एवं दर्शकले मौलिकता बोकेको गीत भनेका छन् । तीज संस्कृतिको अन्तर्यलाई झल्काउँदै विवाहित चेलिको वेदनालाई यस गीतमा प्रस्तुत गरिएको छ। माझीका यसअघि ‘रुमाल हल्लाई हल्लाइ’, ‘सालको पात टपरी’, ‘यो मन रुन्न होला र’, ‘लालु पाते नुघ्यो भुइँतिर’लगायत गीत लोकप्रिय छन्। भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।
कपाल खौरिएको क्षण सम्झिएपछि सुरक्षा धेरै बोल्न सकिनन्, सुरक्षाको बोली अड्कियो, आँखाबाट आँसु झर्‍यो !
अब मलाई कसले माया गर्छ भन्दै भ’क्कानीइन बिष्णु माया…भिडियो हेर्नुस